Saamaynta korsashada iyo isbeddelka | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 27, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waan aqrinayaa Kevin Eikenberrybuugga, Hoggaan Cajiib ah: Sii-deynta Hoggaamintaada Hal-Fursad Kasta Hal Mar oo berri la qaxweyn doono Kevin. Waa buug aad u fiican - oo hal cutub ayaa runtii gurigayga ila galay isbeddelka horyaal.
Kevin wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa isbeddelka. Mid ka mid ah tixraacyada uu adeegsado Kevin waa buuggii 1962 ee uu qoray Everett Rogers, Kala duwanaanta Wax-soo-saarka cusub. Waa aragti taagan waqtigii loogu talagalay… taasoo bixinaysa aragti ku saabsan sida aan u qaadanno tikniyoolajiyadda. Burburka waa sida soo socota:
Xitaa ka sii xiiso badan ayaa ah markaad dib u eegis ku sameyso korsashada miisaanka waqtiga. Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyinka korsashada hal-abuurnimada:
Taasi waxay tiri, ma hubo in qofna uu ka hadlay ama cabiray saameynta ganacsi ee korsashada. Mid ka mid ah qaybaha talobixinta ee aan siiyo macmiisha ayaa ah in, mar habka la caddeeyo laakiin aan weli ahayn mid guud, fursadda saameyn ku yeelashada meheraddaadu waa mid weyn. Markuu waqtiga sii socdo ganacsataduna ay sii wadaan inay iska indha tiraan korsashada, waxay lumayaan suurtagalnimada saameyntaas. Waa tan shaxdayda aragtiyeed:
Waxaan daawaday sida shirkaduhu u soo galeen goor hore hal-abuurnimo aan la xaqiijin oo ay ku quusteen tan lacag ah iyo maalgashi teknolojiyaddan ah, iyada oo badankeedii lumisay. Hal tusaale oo casri ah ayaa ah xisaabinta daruurta. Horumariyayaashii hore iyo kuwa korsaday tiknoolajiyaddu waxay ku bixiyeen malaayiin mana kasban faa'iidooyinka; si kastaba ha noqotee, waxay u jeexeen wadada cadeynta tiknoolajiyadda. Markii la caddeeyo, xisaabinta daruuriga ayaa hadda si aad ah uga qaalisan oo si dhakhso leh ayey ugu kordheysaa korsashadeeda. Saamaynta ay ku leeyihiin ganacsiyada adeegsiga kumbuyuutarka daruuriga hadda waa mid aad u weyn… laakiin maadaama lagu qaatay dhammaan warshadaha, mar dambe ma noqon doonto faa'iido tartan - waxay noqon doontaa mid guud.
Markaad dib u eegis ku sameyneyso isku darka suuqgeyntaada isla markaana aad iska indho tireyso muhiimadda waxa ku jira, baloogsiga ganacsiga, hagaajinta mashiinka raadinta iyo warbaahinta bulshada… waxaad lumineysaa fursad aad ugu biirto aqlabiyadda dadka korsada si aad si weyn ugu saameyso ganacsigaaga. Waad sii wadi kartaa sugida - xaqiiqdii waa tan ammaan hab looga baxo Si kastaba ha noqotee, ha la yaabin markii korsashadaada dambe ay wax yar ama aan saameyn ku laheyn ganacsigaaga. Xaqiiqdii, waxaad u baahan kartaa inaad si fudud u korsato si aad ugu sii tartanto suuqa.
Suuqgeeye iyo farsamo yaqaan ahaan, waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay shirkadaha la soco oo leh teknolojiyad. Ma sheegayo in shirkadaha oo dhami ay korsadaan oo korsadaan xilli hore. Waxa aan cadeynayo ayaa ah in shirkadaha ay aqoonsadaan fursadaha hore ee korsashada iyo waxa ay saameyn ku yeelan karto hadii lagu dabaqo dhibaatooyinka ganacsigooda. Ganacsi kastaa wuxuu leeyahay caqabado iyo tikniyoolajiyad isbedeleysa waxay noqon kartaa xalka wax ku oolka ah ee dhibaatooyinkaas.
Tusaale caadi ah: Haddii aad tahay ganacsi ku dhibtoonaya suuqgeynta gudaha iyo helitaanka hoggaan u qalma hadda, korsashada hore waxay u dhigantaa suuqgeynta mashiinka raadinta, horumarinta nuxurka (baloog ganacsi) iyo ballaarinta macluumaadkaaga shabakadaha ku habboon (isku xirka bulshada). Adoo waqti hore qaadanaya, waxaad kubilaabi kartaa bilowga tartamayaashaada waxaadna kasban kartaa saamiga suuqa. Haddii aad sugto, waxaad kuwan u sameyn doontaa si aad mustaqbalka ula socoto… waqtigaagana inaad ku kasbato wuu dhaafi doonaa.